स्वास्थ्य – Page2– mero sathi tv
यस्ता व्यक्तिले भुलेर पनि नखानुस् भटमास, बिष सेवन गरे समान हुन्छ !
mero sathi tv	 ५ चैत्र २०७४, सोमबार १५:११ 0
mero sathi tv	 ५ चैत्र २०७४, सोमबार १३:२८ 0
तपाईलाई गोरो हुने मन छ ? घरेलु ३ सरल र अदभुत उपायहरु जसले तपाइको…
चिसो मौसम छ छाला एव् खुट्टाको कुर्कुच्चा फाट्ने समस्या आएको छ भने यसरी…
Uncategorized भिडिओ मनोरन्जन मेरो साथी टि भी रोचक समाचार
mero sathi tv	 ३ चैत्र २०७४, शनिबार १३:२७ 0
गर्मी बढ्ने क्रम जारी छ । यस्तो मौसममा धुलो–धुँवा र प्रदुषणले निकै सताउने पनि गर्दछ । त्यति मात्र होइन, गर्मीका कारण अनुहारमा डण्डीफोर पनि आउने गर्छ । जसले गर्दा अनुहारको सुन्दरता समेत बिग्रिन्छ । शरीरमा आवश्यक भिटामीन र पौष्टिक तत्वको…
यी खतरनाक रोगहरुबाट छुटकारा पाउन भूईँकटहर खानुहोस्
mero sathi tv	 ३ चैत्र २०७४, शनिबार १०:४० 0
भूईंहटहर रसिलो हुन्छ । यो स्वादिलो पनि हुन्छ । पाकेको, सुनौलो, रसिलो अनि स्वादिलो यो फललाई दाँतहरुले चपाइरहुँ जस्तो लाग्छ किनकि यसमा विशेष प्रकारको आकर्षण हुन्छ जसले कसैको पनि मन लोभ्याउन सक्छ । कति स्वादिलो यो फल! यद्धपि भूईंकटहरमा…
स्वास्थ्य रहन नियमित खानै पर्ने यी खानेकुरा
mero sathi tv	 ३ चैत्र २०७४, शनिबार ०९:०५ 0
सम्पूर्ण शारिरिक, मानसिक तथा सामाजिक अवस्था तन्दुरुस्त हुनु स्वास्थ्य हो। व्यस्तताका कारण धेरैले स्वास्थमा ठूलो मुल्य चुकाएका छन् । खानपिन र आहारमा राम्रो बिचार पुर्याएमा मानिस पूर्ण रुपमा स्वस्थ बन्न सक्ने विज्ञहरु बताउछन् । स्वास्थ्य…
यी १२ अवस्थामा पानी पिउनु गलत
mero sathi tv	 ३ चैत्र २०७४, शनिबार ०८:३५ 0
आवश्यकताभन्दा बढी पानी खानाले शरीरमा रहेका सोडियम, पोटासियमलगायत उपयोगी पदार्थ पिसाबमार्फत बढी मात्रामा बाहिर निस्कन्छन् र शरीर कमजोर हुन पुग्छ । त्यही भएर सानो शरीर भएकाहरूले प्रतिदिन तीन लिटर र ठूलो ज्यान भएकाहरूले चार लिटर पानी खाने…
mero sathi tv	 ३ चैत्र २०७४, शनिबार ०७:३३ 0
‘रातो मासु’ क्यान्सरको कारक मासु शरीरका लागि फाइदाजनक नै छ । यसबाट पर्याप्त मात्रामा प्रोटिन र फ्याट प्राप्त हुन्छ । तर, मासुको बढी प्रयोग भने निकै हानिकारक मानिन्छ । त्यस्तै, मासुको प्रकृतिले पनि स्वास्थ्य समस्यामा भूमिका…
mero sathi tv	 ३ चैत्र २०७४, शनिबार ०६:३० 0
दूध र मह दुवै स्वास्थ्यका फाइदा जनक छ। यी दुवैलाई एकै साथ मिसाएर खानाले यिनीहरुका गुण दुईगुणाले वृद्धि हुने विज्ञ बताउछन्। महमा हुने एन्टीब्याक्टेरियल, एन्टीअक्सिडेन्ट र एन्टीफंगलको गुणले प्राचिन कालदेखि नै महको उपयोग हुँदै आएको छ।…
काँचो केरा खाने गर्नुहाेस्, यस्ता छन् फाइदाहरु
mero sathi tv	 १ चैत्र २०७४, बिहीबार १३:०२ 0
हामी खानेकुरा जे पनि जिब्रोको स्वादका आधारमा खाने गर्छाैं । अझ केरा भनेको पहेलो अनि पाकेको नै मिठो हुन्छ । केरामा भएका तत्वहरु तत्काल शरीरले ग्रहण गरीहाल्छ, यसलाई पाचनको लामो प्रकृयामा अल्झीनै पर्दैन । यही पाकेको केरामा अत्याधिक पोषणतत्व…
कपाल फुलेर हैरान हुनु भएको छ ? कपाल फुल्ने समस्या बाट यसरि छुटकारा पाउनुहोस्
mero sathi tv	 १ चैत्र २०७४, बिहीबार १२:५० 0
कपाल फुलेर हैरान हुनु भएको छ ? कपाल फुल्ने समस्या बाट यसरि छुटकारा पाउनुहोस् ! यदि तपाईको उमेर नपुगेरै युवा अवस्थामै कपाल फुल्ने अर्थात सेतो देखिने समस्या देखिएको छ भने अब त्यसलाई घरमै उपचार गर्न सकिने छ । मानिसको पर्सनालिटीसँग…
नुहाएपछि हात खुट्टाको छाला किन चाउरी पर्छ? यस्तो छ कारण पढेर सेयर गरौं
mero sathi tv	 १ चैत्र २०७४, बिहीबार १२:४९ 0
नुहाएपछि हाम्रो शरिरको केही हिस्साको छाला खुम्चिने गर्छ। हात, हत्केला, औलाको छाला धेरै बेर पानीमा रहँदा खुम्चेर चाउरिएझै हुन्छ। आखिर यसको कारण के हो? केही व्यक्ति बायोकेमिकल प्रतिक्रियाको कारण यस्तो हुने बताउँछन्। पानीमा रहँदा हाम्रो…
mero sathi tv	 ३० फाल्गुन २०७४, बुधबार १६:१५ 0
स्वास्थ्य जीवनका लागि सबै भन्दा ठूलो कुरा हो। जब हामी स्वस्थ हुन्छौँ, तब मात्र जीवनमा खुसी, मिल्छ, काम गर्न मन लाग्छ र जीवनलाई सफल रुपमा स्थापित गर्न सक्छौँ । तर जीवन नै सफल भएन भने हाम्रो जीवन नै असफल बनिदिन सक्छ। हामीले सानो तिनो…